हिमाल खबरपत्रिका | ६० वर्षका विवरण
६० वर्षका विवरण
२०१६ सालको पहिलो संसद्देखिको अभिलेख राखेको संसद् सचिवालयले सूचना–प्रविधिको विकासलाई आत्मसात् गर्दै हालको संघीय संसद्का दुवै सदनका गतिविधि समेट्दै आएको छ।
संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा कार्यरत कर्मचारी । बिक्रम राई
नेपालको संसदीय इतिहासकै पहिलो निर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक १६ असार २०१६ मा बसेको थियो । राजा महेन्द्रले प्रतिनिधिसभाको बैठक रातको ११:४५ बजेका लागि आह्वान गरेका थिए । संघीय संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा रहेको संसद्को कामकारबाही सम्बन्धी विवरण (भर्बेटियम) मा उल्लेख गरिए अनुसार, पहिलो दिनको बैठकमा सभामुख चयन नभएसम्मका लागि गिरिप्रसाद बुढाथोकीलाई कार्यकारी अध्यक्ष तोक्ने पत्र पढेर सुनाइएको थियो । गुल्मी उत्तरपूर्व क्षेत्र नम्बर ८९ बाट निर्वाचित बुढाथोकीलाई प्रमुख सचिव हंसमान सिंहले शपथ ग्रहण गराएपछि उनले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए । त्यस दिनको संसद् बैठक १८ असारको दिउँसो ३ बजे सभामुखको निर्वाचन हुने गरी सम्पन्न भएको थियो । १८ गते नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलो संसद्का सभामुख चयन भए ।
पहिलो संसद्देखि हालसम्मको ६० वर्षका यस्ता प्रायः सबै संसदीय अभिलेख संसद् सचिवालयसँग छ । पहिलो संसद्को संसदीय काम–कारबाहीको विवरण हेर्दा त्यो वेलाको र अहिलेको संसद्मा उठाइने विषयहरू मिल्दोजुल्दो भए पनि कतिपय विषय भने रोचक लाग्छ । संसद्मा लिखित भाषण पढ्न नपाइने, राष्ट्र भाषा नेपाली भएकाले हिन्दी बोल्न नपाइने र नेपाली भाषा नआउने भए सिक्नुपर्ने र सिकुञ्जेलका लागि भने बोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सांसद् जयबहादुर क्षेत्रीले मासिक रु.२०० तलब पाउने सरकारी कर्मचारीदेखि मन्त्री, सहायक मन्त्री तथा सभाका सदस्य सबैले कार्यालय तथा सभामा आउँदा स्वदेशमै उत्पादित कपडा लगाउनुपर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेका थिए । १४ साउनको बैठकमा तुलसीलाल अमात्यले नारी समुदायलाई अग्रगति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको देखिन्छ । उनले बोलेका छन्, “खेदको कुरा छ कि नारी समाजको उत्थानका लागि विशेष कामको व्यवस्था र विवाह, पाचुके आदि विचारणीय विषयमा कुनै कानून बनाउने आश्वासन सरकारले दिएको छैन ।”
संसद्को प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसद्हरूले उडुस मार्न सरकारको कार्यक्रम के छ, मन्त्रीहरूलाई कति भारी दाउरा दिने गरिएको छ भनेर सोधेको अभिलेखमा देखिन्छ । यसबाट त्यतिवेला उडुसले आतङ्क नै सिर्जना गरेको र मन्त्रीहरूलाई अहिले इन्धन सुविधा जस्तै त्यसवेला दाउरा दिने चलन रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । यस्तै, लमजुङका सांसद् श्रीकान्त अधिकारीले राजधानी काठमाडौंबाट पोखरामा सार्न संसद्मा प्रस्ताव गरेका थिए ।
१८ महीना चलेको पहिलो संसद्का कामकारबाहीलाई ठूल्ठूला फाइलमा राखिएको छ । तत्कालीन विपक्षी दलका नेता भरत शमशेरले बेलायत र भारतको संसद्का उच्चस्तरीय बहसका सङ्कलन ल्याएर संसदीय अभ्यास राम्रो बनाउन पहल गरेको पत्रकार जगत नेपालको पुस्तक पहिलो संसद् मा उल्लेख छ । अहिले पनि बेलायत र भारतको अनुसरण गर्दै संघीय संसद्को अभ्यास र अभिलेखलाई राम्रो बनाउने प्रयास गरिएको संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । संघीय संसद्का दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रत्यक्ष श्रव्यदृश्य प्रसारण, भिडियो अभिलेखीकरण त्यही समयानुकूल परिवर्तन र व्यवस्थापन हो ।
प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी
कर्णालीको दैलेखबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद् पार्वती विशुन्के संसद्मा आफूले बोलेका कुराको भिडियो बैठक सकिएपछि फेसबूकमा राख्छिन् । संसद्ले बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने र त्यसको भिडियो पनि राख्ने भएकाले जिल्लाका समस्याबारे बोलेन, काम गरेन भन्ने गुनासो कम भएको उनको अनुभव छ । “बोलेका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चासो देखाएर काम गरेका उदाहरण थुप्रै छन्”, उनी भन्छिन् ।
सुदूरपश्चिमको बझङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाकी सांसद् आशाकुमारी विकसँग पनि विशुन्केकै जस्तो अनुभव छ । उनले जिल्लाका समस्याबारे संसद्मा उठाए लगत्तै भिडियोका आधारमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाउँछन् । यसले गर्दा सांसद्हरूले आफूहरूको विषय उठाइरहेका छन् भनेर आम जनताले जान्न पाएको उनको भनाइ छ ।
सांसद्हरूले संसद् बैठकमा बोलेका भिडियो वेबसाइटमा राखिदिने गरेकाले विशुन्के र विक लगायतका धेरै सांसद्लाई सजिलो भएको छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक शुरू भएदेखि नै दुवैको बैठक यूट्यूबबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरेको छ भने त्यसको भिडियो वेबसाइटमा पनि राख्ने गरेको छ । वेबसाइटको ‘भिडियो संग्रह’ मा बैठक बसेको मिति अनुसार सांसद्हरूको छुट्टाछुट्टै तथा अन्य गतिविधिको पनि भिडियो राख्ने गरिएको छ । यस्तै, बैठक बसेको दिनको संसद् गतिविधि ‘सूचनापत्र’ मा पढ्न पाइन्छ ।
संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा १६ असार २०१६ को संसद् बैठकको अभिलेख ।
वेबसाइटमा बैठकको गतिविधि छोटकरीमा हुन्छ । विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न भने सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा जानुपर्छ । बैठकका हरेक गतिविधिबारे टाइप गरेर पुस्तकालयमा राख्ने गरिएको संघीय संसद् सचिवालयका सहायक–प्रवक्ता दशरथ धमला बताउँछन् । “संसद्को गतिविधि जनतालाई जस्ताको त्यस्तै जानकारी होस् भनेर प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेदेखि भिडियो संग्रह गर्ने र त्यसलाई अक्षरमा उतारेर पुस्तकालयमा राख्ने गरिएको छ”, उनी भन्छन् । सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार, राष्ट्रिय सभाको बैठकको गतिविधि एक–दुई दिनमै टाइप हुन्छ भने प्रतिनिधिसभा ठूलो भएकाले अर्को अधिवेशन शुरू हुँदासम्ममा अघिल्लो अधिवेशनको सक्ने गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाले आफ्नो वेबसाइटमा बैठकको भिडियो त्यसै दिन राखे पनि प्रतिनिधिसभामा भने सांसद् संख्या धेरै भएकाले कहिलेकाहीं बैठकको भोलिपल्ट राख्ने गरिएको छ । माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा ५९ सांसद् छन् भने प्रतिनिधिसभामा २७४ सांसद् । राष्ट्रिय सभाले त बैठकमा उपस्थित सांसद्हरूको हाजिरी (उपस्थिति विवरण) पनि बैठककै दिन वेबसाइटमा राख्ने गरेको छ । प्रतिनिधिसभाले पनि सांसद्हरूको उपस्थिति विवरण वेबसाइटमा राख्ने तयारी गरिरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
पहिलो संसद पुस्तकका लेखक एवं पत्रकार नेपाल संसदीय काम–कारबाहीको अभिलेखमा अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी लगायत सबैको पहुँच हुनुपर्ने बताउँछन् । मदन पुरस्कार पुस्तकालयका निर्देशक राजीवरञ्जन सिंह पनि ऐतिहासिक दस्तावेजलाई सुरक्षित गर्नु र सार्वजनिक गर्न मिल्ने दस्तावेज सजिलै हेर्न सकिने गरी सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सके राम्रो हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संघीय र प्रदेश संसद्हरूले आफ्ना गतिविधिलाई अहिलेदेखि नै अडियो, भिडियो, फोटो र टेक्स्टमा छुट्टाछुट्टै बनाएर सुरक्षित हुने गरी राख्नुपर्छ ।” संसद् सचिवालयसँग पहिलो संसद्देखिकै धेरैजसो दस्तावेज सुरक्षित रहे पनि पुराना तस्वीरहरू भने खासै छैनन् । पुनस्र्थापित संसद् २०६३ साल यताका तस्वीरहरू मात्र सङ्कलित गरिएका छन् ।
अनलाइन मार्फत संसदीय अभिलेख सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनकै लागि संसद्को कामकारबाही सम्बन्धी विवरणलाई डिजिटाइज्ड गर्ने योजना रहेको संघीय संसद्की पुस्तकालय अधिकृत कमलादेवी शर्मा बताउँछिन् । “पुराना संसद्का कामकारबाही अनलाइनमा हेर्न सकिने गरी बनाइएको छैन, नयाँ संसद् भवन बनेपछि अभिलेख प्रणाली र पुस्तकालय व्यवस्थित हुनेछ”, उनी भन्छिन् ।
संघीय संसद्का दुवै सदनका ३३३ सांसद्मध्ये ३३० जनाको परिचयात्मक भिडियो पनि वेबसाइटमा राखिएको छ । मुलुकको संसदीय इतिहासमा परिचयात्मक भिडियोको अभ्यास संसद् सचिवालयले पहिलो पटक गरेको हो । तीनदेखि पाँच मिनेटसम्मको भिडियोमा सांसद्हरूले आफ्नो बारेमा आफैंले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाका तीन सांसद् प्रदीप गिरि, कर्मा घले र उमाशंकर चौधरीको भिडियो भने छैन । संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार, पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि नआएपछि उनीहरूको भिडियो बन्न नसकेको हो ।
यसअघि पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका सदस्यहरूको संक्षिप्त परिचय समेटेर पुस्तक प्रकाशन गरिएको थियो । तर, सांसद्हरूसँगको कुराकानीका आधारमा निकालिएको पुस्तकमा कतिपय गल्ती भएको र फोटो समेत फरक पर्ने समस्या भएकाले भिडियो प्रोफाइल बनाइएको प्रतिनिधिसभाकी निवर्तमान उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे बताउँछिन् । सांसद्हरूको परिचयात्मक भिडियोका साथै नाम, फोटो, जिल्ला, पार्टी, फोन नम्बर र इमेलसहित विवरणको सूची पनि वेबसाइटमा राखिएको छ । साथै, पुस्तिकाको रूपमा ‘टेलिफोन डाइरेक्ट्री’ पनि प्रकाशन हुँदै आएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा निष्क्रिय
अभिलेखमा राम्रो मानिए पनि संघीय संसद्का दुवै सदन सामाजिक सञ्जालमा भने निष्क्रिय छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको फेसबूक र ट्वीटर खाता १० महीनादेखि अद्यावधिक गरिएको छैन । जम्मा १०३६ लाइक रहेको राष्ट्रिय सभाको फेसबूक पेजमा १३ मे २०१९ मा ‘२०७६ वैशाख ३० को राष्ट्रिय सभाको प्रि–बजेट छलफल’ को सूचना राखिए यता कुनै पोस्ट गरिएको छैन । त्यस्तै, २०१८ फेबु्रअरीदेखि शुरु गरिएको राष्ट्रिय सभाको ट्वीटर खाता २७ मार्च २०१९ पछि सक्रिय छैन । यसको खातालाई ६० जनाले मात्र पछ्याएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको फेसबूक पेजमा १४०६ जनाले मात्र लाइक गरेका छन् । पछिल्लो पटक १३ मे २०१९ मा अपडेट भएको सो पेजमा पनि प्रि–बजेट छलफलकै सूचना राखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको ट्वीटर खाता पनि २७ मार्च २०१९ पछि चलाइएको छैन । यसका फलोअर्स १७७ मात्र छन् ।